mushaTURKEYDunhu reMarmara16 Bursa89% yeVagari Vanoda Kutenga Dzimba Dzemukati
07 / 01 / 2020 16 Bursa, GENERAL, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Automotive, TURKEY
% yevagari iwe unoda kutenga mota dzekumusha
Industry and Technology, Va Mustafa Varank, akazivisa migumisiro wokutanga ongororo yakaitwa Car Turkey vake. 89% yevagari vechikamu vari muongororo iyi vari kuda kutenga Gurukota rezvemhando pamwe neTekinoroji Varank, nzvimbo dzekutengesa, nzvimbo dzekuchaira dzichamiswa, akadaro. Vashumiri Varank, achipa Turkey mutengo motokari achava chiratidzo chechetere kukwikwidzana vorongerwa rokutanga kota gore rakati kuti nheyo yacho fekitari.
Industry and Technology, Va Mustafa Varank akaita yakagovana mashoko matsva pamusoro motokari kuTurkey. Achisimbisa kuti Turkey kuva chaizvo zvakafadza pamwe kufarira vagari zvekuratidza motokari Varank, Turkey mugove munyika migumisiro ongororo yakaitwa motokari. Maererano ongororo 97,6 muzana motokari Turkey kuti zvinotsigirwa achiudza Varank zvazvingava, akati kuti 89 muzana yevaya vanoda kutenga.
Minister Varank, chekutanga chinangwa chefekitori; Vachitaura kuti hwaro hwakavambwa uye kuvaka kwakatanga muGemlik muhafu yekutanga ya2020, "Muchirongwa ichi, kambani yakagadzira uye yakaronga makore anotevera gumi nemashanu nehunyanzvi. Vachagadzira marii, ndeipi mhando dzavachagadzira, ndedzipi mari dzavanoda, nzira dze brand ichave, dzese dzakarongwa. Mukati mehurongwa hwechirongwa, mota dzekutanga dzichaburitswa kubva mukugadzirwa kwemazhinji pakupera kwa15. konu
Minister Varank vakati mabasa arikuenderera mberi kuitira kuti rudzi urwu runyore kunyoreswa mukugadzirwa uye ndokuti, "Izvi zvichapera mukati megore." Iyo pre-order application haisati yatanga nekubhadhara pre-mari. Iyi ichava nzira inoshandiswa nekambani mushure mekutangwa kwechiratidzo. "
Iri BHAIBHERI RINOGADZWA
Vashumiri Varank, Turkey kwakaita Motokari Initiative Group, achitsanangura kuti kutanga kushanda pamwe zvakawanda tsvakurudzo musika, "ipapo chokuita zvizivikanwe, kunoenderana design, tichiratidza kuti Turkish unhu, anogona kuva Turkish rudzi, vachamhanya zvinopesana dzakawanda munhandare, riri nyore madudzirwo, kunyoresa Kuti ugadzire mhando iyo yakanyanya kutsanangurwa basa kunoitwa. Iyo mhando ichave yakatarwa mukati megore rino
Mushure mekuvhurwa kweInformatics Valley, Varank akataura kuti zvikumbiro zvakagamuchirwa kubva kumakambani makumi matatu nemaviri muminda dzakasiyana siyana uye akataura kuti hunyanzvi hwekufamba zvine hunyanzvi huchavakirwa muInformatics Valley.
Kugadzirwa kwakawanda pakutanga kwe2022
Minister Varank, iwo masangano akakodzera kuti agadzirire mepu yemigwagwa yekumisikidzwa kwenzvimbo yekuchaja motokari, akati: altyapı Iyi mota ichave yakagadzirira kana mota iri pamusika. Kushanda kunoenderera mberi kweiyo mhando, maitiro aya anozopedzwa mukati megore. Tiri padhuze nekugadzira 100-150 prototypes. Vanozoedzwa. Pakutanga kwa 2022, iyo fekitori inotanga kugadzirwa kwemasi ..
vimbiso Turkey Turkey raMwari chete zvatengwa nokuti Automobile Enterprise Group (TOGG) zvinoshanda kuna Minister kurondedzera Varank, "kusvikira motokari zviuru 2035 ra30, hatigoni nechokwadi chero zvakasimba mauri." Iye akati.
DZIDZISO DZESVONDO DZESHURE
Europe, Russia, United States ndiyo pakati munzvimbo shoma Turkey achitaura kushanda kuti vaverengwe akaita Varank achirova zvakagadzirwa motokari yacho, akati kwezvivako vaizova vakagadzirira kuenda apo motokari pamusika. (sanayi.gov.t ndiye)
SNCF inobvumirana neSpain Comsa Rail Transport kuti iwane 25 mugove
50 Percentage Discount yeTCDD
98 Iperesenti yeVagari Vakaita seYHT
General Magetsi uye Nokia vanoda kutenga Alstom
82 Percentage yeBalıkesir Unoda Nostalgic Tram Project
Dzimba dzomumusha Silkworm dzakazivisa kune vagari muBursa City Square
chokutanga chombo chemukati Silkworm chakazivisa kune vagari muBursa City Square
Kutumira Kutungamira Germany inoenderera Kuchengeta Iyo Pulse yeLogistics Line